Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey Shabaab iyo Mogdisho.
Wararkii ugu danbeeyey Shabaab iyo Mogdisho.
Somalia:-Abuu Mansuur Roobow Ali oo hubka iyo ciidanka Shabaab ee Bay iyo Bakool ku wareejinaya Mohamed Ibrahim Caabsade si loo bad baadiyo awooda ciidankaas iyo hubkooda, iyadoo ay hada wada hadaladu ay meel fiican marayaan. Halka Shabaabka degaan ahaan ka soo jeeda Mogdisho ay walito gubayaan amaba dagaal ka wadaan gudaha Mogdisho.
Kedib waxii ka danbeeyey markii ay dalka ka curteen dagaal yahanada Shabaab, hogaamiyaasha Shabaab waxey u shaqeynayeen siyaabo kala duwan. kuwa ka soo jeeday degaanada waqooyi waxey Shabaab ka tirsanaayen iyagoo ay nabadi ka jirto degaanadooda caruurta iyo shacabkooduna heystaan nabadgalyo iyo waxbarasho. sidoo kale waxaa hogaamiyaashii Shabaab ee ka soo jeeday degaanada Waqooyi qaabkii ay u shaqeynayeen kaka dayday Abuu Mansuur Roobow Ali oo isagu degaanada uu ka soo jeedo ka ilaaliyey intii karaankiis ah iney dhibaato shacabka soo gaarto.
Sidoo kale markii uu la wareegayey degaanada ay maanta Shabaab gacanta ku heyso ee Bay iyo Bakool waxaa hubkii iyo ciidamadii ku wareejiyey Mohamed Ibrahim Xaabsade oo markii uu hubka wareejiyey isaga iyo wafti uu hogaaminayey laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha degmada Waajid. Abuu Mansuur iyo Xaabsade oo maalmahan ilaa iyo markii ay baneeyeen ciidanka Shabaab magalada Mogdisho wada hadal u socday labadan masuul ayaa hada maraya meel fiican iyadoo uu Abuu Mansuur codsaday in lagala wareego hubka iyo ciidanka si aysan rabshado uga bilaaban degaanada ay ka soo jeedaan Digil iyo Mirirfle.
Abuu Mansuur ayaa go,aankaan qaatay kedib markii uu ogaaday inuu yahay shaqsiga ugu hubka badan Shabaabka Somaliya markii uu ciidankiisa kala soo baxay dhamaan gobolada ay maamulaan Shabaab oo ay ugu danbeysay Hiiraan oo uu ciidankii ka joogay ka saray 24tii saac ee ugu danbeysay.
Dhinaca kale deganada Bay iyo Bakool durbaba waxaa ka bilaawday wacyi galin dadka looga dhaadhicinayo iney la shaqeeyaan Xaabsade oo dhawaantan la wareegaya amaanka deganadaasi marka uu soo gabo gaboobo wada hadalada ku dhaw gaba gabada.
Hadaba waanu garanay Shabaabkii ka soo jeeday degaanada waqooyi ee ay caruurtoodu wax u baranayaan dhibtiina ka soo fogeeyey halkaasi. sidoo kale waanu aragnay kuwa deganaada Bay iyo Bakool. maxaa kuwa Mogdisho, Sh/dhexe iyo Hiiraan u diiday iney dadkooda sidan u bad baadiyaan oo ay kasbadaan halkii ay askar joogto ah ka ahaan lahaayeen iyagoo aan wax qorshe ah heysan?
Jawaabtu wey iska cadahay oo markii hore ayey wax aysan ka warqabin qaabkii loo dhisay iskaka biireen marka maadaama aysanba shaleyto dhismahii ururka wax talo ah ku laheyn hada oo uu ururkii burburay maxaa laga filan karaa?
La soco wararkeena danbe ehsiiska Xaabsade iyo Abuu mansuur meesha uu ku danbeeyo inkasta oo ay saacba saaca ka daneeya ay arimuhu isbedelayaan.
· admin on August 09 2011 12:41:12 · 0 Comments · 3466 Reads ·
14,569,438 unique visits